Chelsea Oo Go'an Cusub Ka Qaadatay Xiisaha Ay U Qabtay Xiddiga Borussia Ee Dortmund Erling Braut Haaland
HomeHoryaalka GermalkaChelsea oo go’an Cusub ka qaadatay xiisaha ay u qabtay xiddiga Borussia ee Dortmund Erling Braut Haaland
Chelsea oo go’an Cusub ka qaadatay xiisaha ay u qabtay xiddiga Borussia ee Dortmund Erling Braut Haaland
February 2, 2022 Horyaalka Germalka, Horyaalka Ingiriiska, Suuqa kala iibsiga, Wararka Ciyaaraha 0
Chelsea ayaa qaboojisay xiisihii ay u qabtay weeraryahanka Borussia Dortmund Erling Braut Haaland .
Kooxo kala duwan oo ka dhisan gudaha England iyo guud ahaan Yurub ayaa isha ku hayay xiddiga heerka caalami ee dalka Norway sanadkii la soo dhaafay, iyadoo la isla dhexmarayay inuu ka tagayo kooxda Jarmalka.
Blues ma aysan sameyn saxiixyo badan oo waaweyn intii lagu jiray suuqa kala iibsiga ee Janaayo, sidoo kale ma aysan ogolayn dadka inay ka tagaan bisha xasilloon ee kooxda macnahaas.
Sida laga soo xigtay Evening Standard , Chelsea ayaa haatan qaboojisay xiisihii ay u qabtay Haaland, iyadoo kooxdu ay ka walaacsan tahay inuu la qabsan waayo Premier League, sidaas darteed uu saameyn yar ku yeelan karo.
Blues ayaa kula soo wareegtay Romelu Lukaku xagaagii lacag dhan 97.5 milyan ginni, halka Thomas Tuchel uu sidoo kale haysto Timo Werner , Kai Havertz , iyo weeraryahanka amaahda ku jooga ee Armando Broja oo ah dookhyo kale oo uu ka ciyaari karo doorka weerarka.
Chelsea ayaa dhalisay 48 gool ilaa haatan horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan, kaliya Manchester City iyo Liverpool ayaa ku faana rikooro fiican.